Barattoota Yunivarsiitii Haramaayaarraa ari'aman: 'Barattoonni 68'n Godinaalee Wallaggaarraa dhufne - BBC News Afaan Oromoo
Barattoota Yunivarsiitii Haramaayaarraa ari'aman: 'Barattoonni 68'n Godinaalee Wallaggaarraa dhufne
Image copyright Yunivarsiitii Haramaayaa
Barattootni Oromoo Yunivarsiitii Haramaayaa 77 ta'an badii keenya osoo hin beekiin waggaa lamaaf guutummaatti barnootarraa dhorkamnee jechuun komatan.
Barattootni kunniin Amajjii Sagal bara 2020 iddoo garaagaraa irraa osoo dhimma isaaniif socho'uutti jiranii qabamanii guyyaa lamaaf kutaa mooraa Yunivarsitii keessaatti hidhamanii akka turan barataan Agroo-Ikonomiksii waggaa sadaffaa Yaadasaa Kinfuu BBC'tti himeera.
Akka barataan kun jedhutti Amajjii 11 naannoo sa'aa afuriitti ''yeroo sa'aa tokko hin caalle gidduutti mooraa gadhiisnee akka baanu xalayaan waggaa lamaaf ari'amuu keenya ibsu nuuf raabsamee," jedha.
Yunivarsitiiwwan Bulee Horaa fi Hawaasaatti lubbuun barattootaa dabre
Komaandara Nageenyaa Mooraa eeganiin xalayaan kun raabsamuus hima.
"Waan tokko osoo nu hin qoratiin, barataan yakki raawwate osoo hin qoratamiiniifi badiin isaa ifatti osoo itti hin himamiin ari'amnes," jedha.
Xalayaan barattoota kanaaf Afaan Amaaraatiin katabamee isaan qaaqqabe, ''baruuf barsiisuun naga qabeessaan akka hin adeemsifamneef kaayyoo badiisaa qabatanii barattoota socho'aa jiran keessaa tokko waan taateef Yunivarsiitichi waggaa lamaaf barnootarraa si dhorkuun si adabeera," jedha.
Image copyright Yaadasaa Kinfuu
Torbee darbe Yunivarsiitii Haramaayaa keessatti barattoota haalli nageenyaa Lixa Oromiyaa jiru nu yaaddesseera jedhanii uffata gurraacha uffachuun sagalee isaanii dhageessisuuf yaalanii turan.
Sochin kunis gara jeequmsaatti jijjiiramee mooraa Yunivarsitichaa keessatti konkolaattotni caccabanii qabeenyaarra miidhaan qaqqabee akka ture Pireezidantiin Yunivarsiitichaa Dr. Jamaal Yusuuf BBC'tti himanii turan.
Barattootni amma tarkaanfiin kun irratti fudhatame sababa isaa ifatti akka hin beekneefi osoo gaafattaniis qamni isinii deebisu hin jiru jedhamuu himanii, huccuu gurraacha uffachuun hiriira hin hayyamamne bahuun sababa ta'uu akka hin oolle shakkuu.
Muummee Istaatiksiitti barattuu waggaa lamaffaa kan turte Eebbisee Tsaggaayee ''hiriyyoota koo afur waliin waldaa qaala Hiwootii Haromayaa dhaqnee kadhannee yoo deebinu, konkolaataa waraana hidhatee deemuun koottaa galaa nuun jedhanii nu qabanii'' jetti.
Yunivarsiiticha keessatti kutaa dhiphaa 3*4 ta'e keessatti barattoota 60 ola walitti qabuun bishaaniifi nyaata gahaa malee ifa daqiiqaa muraasaaf qofa argachaa rakkoo hedduu keessa turrees jetti barattuu Eebbiseen.
Amajjii 11, mooraa keessa osoo meeshaa isaan barbaachisu 'akka waraqaa eenyummaallee'' hin fudhatiin gara waajira Poolisii aanaa Haroomayaa geeffamuufii gara galgalaas konkolaattota geejiba uummataa lamaan Finfinneetti gaggeefamuus dubbatu.
''Geejiba hin qabnu halkan kanaan eessa dhaqna jennee gaafannaan warri waajira poolisii aanichaa walagahanii maatii keenyatti akka gallu konkolaataa uummataa lama qopheessanii hirbaata Mooraa dhufe nu nyaachisanii nu gaggeesan. galata guddaa qabnaafi'' jettii barattuu Eebbiseen.
Barattootni nageenya baruuf barsiisuu danqitaniittu jedhamuun dhorkaan waggaa lamaa irratti murame 77 wanti wal isaan fakkeessuu ''hundu barattoota Oromoo ta'uufi isaan keessaa 68 kan ta'an Godinoota wallaggaa keessaa kan dhufan ta'u'' barataa Yaadasaa Kinfuu himeera.
Yuunivarsiitilee keessatti barattootni 170 adabamuun 500 ol akeekkachiifaman
Hedduun isaanii afaan Amaaraa dubbaachuutti kan rakkatan ta'uu fi maatiin isaanii naannoo Godinaalee wallaaggaa jiran waliin bilbilaanis ta'u wal qunnamuun akka isaan rakkisee, magaala Finfinnee keessatti rakkachaa akka jiraniis dubbataniiru.
Ammaaf waajira ABO naannoo Gullallee jiru qubatanii akka jiraniifi iyyachuu akka barbaadan dubbatu.
Yunivarsiitichi maal jedha?
Pireezidantii Yunivarsiitichaa Dr. Jamaal Yusuufiin komii barattootni kunniin dhiyeessanirratti deebii akka nuu kennan irra deddeebiin yaalluus isaan argachuu hin dandeenye.
Hoogganaa Hariiroo Hawaasaa Yunivarsiitichaa obbo Alemsheetiin aragannus ibsa Yunivarsiitichi fuula Feesbuukii isaarratti maxxanseen alatti odeeffannoo dabalataa kennuu hin danda'uu jedhan.
Yunivarsiitichi guyyaa kaleessaa fuula fb isaarratti ibsa maxxanseen ''Barattootni tarkaanfiin irratti fudhatame Badiilee akka Qabeenya yuunivarsiitii kan tahe Motorsaayikiloota lama gubuu, konkolaataa caccabsuu, ATM Machine caccaabsuu irratti kan hirmaachaa turanii fi kanaan duraas wal dhabbii sabaa fi amantaa kaasuuf yaalii godhaa warra turaniidha'' jedheera.
''Kana malees barattootni kanneen gareen jaaramanii haalli baruu fi barsiisuu Yuunivarsiitii keessatti nagayaan akka itti hin fufne godhuuf adda dureedhaan barattoota biraa sodaachisaa fi doorsisaa warra turanii fi yeroo adda addaatti gorfamanii akkasumaS akeekkachiisni kennameefii kan sirraahuu didaniidha.''
Yuunivarsitiin Haramaayaa tarkaanfii kana kan fudhate ''sabaan adda baasee/qoodee osoo hin taane badiirratti hundaa'eeti.'' jedheera.
Miidiyaa Hawaasummaarratti dhimmichi sabummaarratti kan xiyyeefate akka ta'etti kan haasa'amu dogongoraa jedheera.
Amajjii 10 ibsa maxxanseen ammoo ''barsiisoota fi hojjettoota bulchiinsa yuunvarsiitichaa ajandaa dhokataa qabachuun socho'aa jiran qorachuun yeroo itti aanu keessatti tarkaanfiin kan irratti fudhatamu taha'' jedheera.
Barnoota Olaanoo Itoophiyaa: Yunivarsitiiwwan Bulee Horaa fi Hawaasaatti lubbuun barattootaa dabre
Du'uu barataa Yuunvarsiitii Diillaa duuba iccitiin jiru maali?
Namni Koranaa vaayirasii qaba jedhamee shakkame tokko Keeniyaatti argame